Inona No Mety Ho Fiantraikan’ny Fahaleovantena Ekaosey any Karaiba? · Global Voices teny Malagasy
Inona No Mety Ho Fiantraikan'ny Fahaleovantena Ekaosey any Karaiba?
Voadika ny 17 Septambra 2014 8:58 GMT
Vakio amin'ny teny Magyar, Español, русский, 繁體中文, 简体中文, Français, বাংলা, English
Antokon'ny Mpiasa Manohana ny Fahaleovantena Ekaosey; saripikan'i Màrtainn MacDhòmhnaill, nampiasaina avy amin'ny lisansa CC BY-NC 2.0.
Amin'ny mahazanatany teo aloha sady mpikambana ao amin'ny Commonwealth amin'izao fotoana izao, misy vondrona izay tao anatin'ny Fitondram-Panjaka Mitambatra (UK) sady efa nisy fotoana tao anatin'ny ampira, tafiditra tanatin'ny nofeheziny, Karaiba io vondrona io izay liana dia liana tokoa amin'ny resaka fitsapa-kevi-bahoaka ekaosey amin'ny fahaleovantenany manoloana ny Fitondram-Panjaka Mitambatra (UK). Ny fizorana mankany amin'ny fahaleovantena dia atosiky ny The Scottish National Party, [Antoko Nasionaly Ekaosey] izay nahazo tanteraka ny fandresena tamin'ny fifidianana depiote ekaosey tamin'ny 2011.
Milaza ny Mpanolotra ny “Eny” fa tsy mifanaraka intsony amin'ny andro maoderina ilay fiarahana efa naharitra an-jato taonany. Mahatsapa araka ny filazan'ny Indiana Andrefana azy ho “zazasary” ao anatin'ny Parlemantan'i UK ry zareo ary mihevitra fa mahasoa an'i Ekaosy kokoa ny ampiasany manokana ny tanjany ara-toekarena (miainga voalohany avy amin'ny vola azo amin'ny solika sy ny entona fandrehitra).
“catch a fire”, blaogy velomin'ilay mponina iray ao Bermuda izay mbola afaka ary hifidy amin'io fitsapa-kevi-bahoaka amin'ny Alakamisy io, no nieritreritra fa ny mety hisy fiantraikany lalina amin'i Bermuda ny fifidianana ny fahaleovantena. Nanamarika izy fa nanao fitsapa-kevi-bahoaka amin'ny fahaleovantena ity zaratany britanika ampitan-dranomasina ity tamin'ny 1995, saingy “tamin'ny ankapobeny, ny fanohanana ny fahaleovantenan'i Bermuda dia nanodidina ny 25-30% – […] nahazo ampaham-bato kely.” Nanolo-kevitra ilay blaogera fa na dia mety hisy aza ny fahavezeran'ny tombontsoa kely [karaoty] kolonialy sy ny fizakana maha-teratany Eoropeana, dia mety afa-misintona ny fisainan'ny Bermudiana amin'ny mety hahafahana mieritreritra ny fahaleovantena bermudiana ny hetsika ho amin'ny fahaleovantena ekaosey – sy ny tena fahaleovantena ekaosey raha mandresy ny Eny –.
Manome tombontsoa maro eo ambanin'ny elon'ny Commonwealth of Nations ny Fitondram-Panjaka Mitambatra (UK), amin'ny endriny amin'izao fotoana izao (ary ao anatin'izany indrindra i Ekaosy). Miasa miaraka amin'ny hafa amin'ny resaka demokrasia, ahitana lohahevitra tahaka ny zon'olombelona, fandriampahalemana iraisampirenena, mangarahara, fahaiza-mitondra ary fampandrosoana lovainjafy, soatoavina izay lambolamboina hamirapiratra ao amin'ny Satan'ny Commonwealth ireo fanjakana mikambana ao. Mamaly ny filan'ireo firenena mpikambana ao aminy marefo ara-toekarena sy somary tratra aoriana ihany koa ireo fanjakana mpikambana ao aminy.
Ao anatin'izany zavatra vao notantaraina izany ny lahatsoratr'ilay mpitsidika ao amin'ny blaogy Barbadiana ampielezana The Bajan Reporter no milaza ny fahaleovantena ekaosey ho “tapakila mankany amin'ny fahantrany ihany, sy ny fiantraikany izay mety hihoatra ny sisintaniny”:
For countries in the Caribbean, a shrunken UK has several consequences. One of them is as basic as contributions to the Commonwealth Secretariat and its Fund for Technical Cooperation. […] The 12 Commonwealth Caribbean countries also need a strong UK in the European Community and in the Organization for Economic Cooperation and Development as an advocate for Caribbean interests […] there are a host of economic linkages including tourism, investment and development assistance that a less well-off UK will certainly be forced to curtail.
Ho an'ny firenena eto Karaiba, hisy fiantraikany maro ho azy ireo ny fihenan'i UK. Iray amin'izany ny tsotra indrindra toy ny latsakemboka atao amin'ny Sekretariàn'ny Commonwealth sy ny Famatsiam-bola Ho Amin'ny Fiaraha-Miasa Ara-Teknika. […] Mila UK matanjaka ao anatin'ny Firaisambe Eoropeana sy ny Fikambanana Ho amin'ny Fiaraha-Miasa ara-Toekarena sy ny Fampandrosoana hiaro ny tombontsoan'i Karaiba ny firenena 12 mikambana ao amin'ny Commonwealth. Maro ny fifandraisana ara-toekarena, ka ao anatin'izany ny fizahantany, ny fampiasam-bola ary ny fifanoroana ara-pampandrosoana izay tsy maintsy ho ahenan'ny Fitondram-panjaka Mitambatra mihakely hery.